Baarlamaanka ayaa baasboorka u gudbin doona tirada xubnaha golaha deegaan ahaan - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA »Baarlamaanku wuxuu qeexayaa sharciga tirada xubnaha golaha deegaan kasta
Xildhibaanadu waxay soo gudbiyeen todobo sharci oo cusub. Mid ka mid ah ayaa dejiya tirada lataliyayaasha ee Golayaasha Gobolka ee mustaqbalka.
Tan iyo March 12, saraakiisha la soo doorto ayaa ku xeel dheeraa toddobada biilood oo ay hoos yimaadaan fuliyaha. Waxa ugu badan ee la filayey waxay la xidhiidhaan doorashooyinka soo socda ee soo socda. Tani waa biilka lagu dejinayo tirada xildhibaannada gobolka.
Xildhibaannadu waxay sidookale qaateen mashruuc ku saabsan 90 tirada xubnaha golaha deegaanka.
Dhig Warega of madaxweynaha in uu soo saarayaa qoraalka maalmaha 15 iyo hagaajin mushahar ka mid ah saraakiisha iyo xubnaha guddiga; iyo ugu dambeyntii in la isugu yimaado college doorashada.
Sidoo kale waa la aqbalay, sharci qabyo ah oo lagu xoojinayo codeeynta doorashooyinka ee hay'adda gobolka.
Ma ahayn kaliya doorashooyinka gobollada ee ku yaala menu. Xildhibaannada iyo senatooriyadu waxay hirgeliyeen xeer cusub oo shidaal baaris ah iyo sharciyo cusbooneysiinaya nidaamka Amarada Qaran ee kuwa kale.
casharka kan xiga baarlamaanka la qaban doono bisha June. Waa in la soo dhaafay ee 9e-dejinta ee Golaha Qaranka ee sharci dajinta iyo degmada September 2019 ka hor.
Kulanka baarlamaanka ee bisha Maarso wuxuu galayaa xaruntan 10 april 2019,
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1107304-cameroun-le-parlement-adopte-une-loi-sur-le-nombre-de-conseillers-par-region